China Pesticides - Enge Biotech
Nharembozha / Whatsapp / Wechat: 0086-13933032315
Kugamuchirwa Kambani Yedu
Enge Biotech ndeimwe yeinotungamira agrochemical inogadzira muChina, inonyanya kuita zvipembenene, Fungicides, Herbicides, zvirimwa zvekukura zvirimwa, Fertilizers, zvigadzirwa zvinoenderana uye sevhisi. kupa masevhisi ekuwana chikafu chakaringana chakaringana, kusvibiswa kushoma uye zvisaririra, chengetedza hupenyu nezvakatipoteredza, isu tinopa mhando yepamusoro uye yakanaka sevice kune vedu vatengi, tinogamuchirwa kuuya kuzoshanyira kambani yedu!
Zvese zvigadzirwa zviri pasi peNational standard uye ISO9001, isu tinotsigirawo SGS uye imwe yechitatu bvunzo
Enge Biotech locates muShijiazhuang Hebei, China. vanoita mukugadzira agrochemicals anosanganisira Insecticides, Fungicides, Herbicides, Zvirimwa zvekukura zvinodzora uye Fertilizers. Chikwata chedu chine makore anopfuura makumi maviri chiitiko chekugadzirwa kwezvipembenene. Tsigira zvinopfuura makumi mashanu zvinhu kunyoreswa (ICAMA) uye nekugona kwakasimba paR & D chigadzirwa chitsva.
Tsigira chirongwa kunyoreswa
Enge mafekitori anodzora zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvese zviri pasi peNational standard uye ISO9001, isu tinotsigirawo SGS uye imwe yechitatu bvunzo.
Kurima ndicho chinhu chikuru kwazvo pasi rose, Kukosha kwedu uye chinangwa ndechekusimudzira hupenyu hweavo vanogadzira nevaya vanodya, kuona kufambira mberi kwemajenareta anouya.
Chikwata chedu chine makore anopfuura makumi maviri chiitiko chekugadzirwa kwezvipembenene. Tsigira zvinopfuura makumi mashanu zvinhu kunyoreswa (ICAMA) uye nekugona kwakasimba paR & D chigadzirwa chitsva.
Mashandisiro ekushandisa Difenoconazole nenzira kwayo？
Yakakwira-inoshanda, Yakaderera-huturu, Broad-spectrum fungicide-Difenoconazole
Kudyara kwekukura mutongi DA-6
Iyo thiamethoxam vs imidacloprid
Kwete. 158, Huaian East Road, Yuhua Dunhu, Shijiazhuang, China